FALLANQEYNTA GROUP B: Paris Saint Germain VS Celtic, Anderlecht VS Bayern Munich- Munic & Paris Oo Kulamo Bashaal Ah Ciyaaraya | Ciyaarside.com
FALLANQEYNTA GROUP B: Paris Saint Germain VS Celtic, Anderlecht VS Bayern Munich- Munic & Paris Oo Kulamo Bashaal Ah Ciyaaraya
Celtic ayaa isha ku heysa inay fursad u hesho sidii ay kaga mid noqon laheyd kooxaha ciyaaraya tartanka Europa League, waxaana kaliya ay u baahan tahay barbaro kulanka ay caawa la ciyaareyso kooxda Paris Saint-Germain.
Celtic guuldarradii 2-1 aheyd ee kasoo gaartay Bayern Munich ayaa la micno aheyd inaysan ugudbi karin wareega knockout tartanka Champions League.
Kooxda Brendan Rodgers ayaa weli ku jirta kaalinta seddexaad ee Group B, si kastaba ha ahaatee, seddex dhibcood ayay ka sareeyaan Anderlecht xili laba kulan uu ka haray Group-ka.
GAROONKA: Parc des Princes
SAACADA: 10: 45 Pm
Daafaca dhexe ee Jozo Simunovic ayaa kursiga keydka kusoo laabtay ka dib markii uu ka qeyb galay kulankii Ross County ee Sabtidii, waxaana uu hadda kasoo kabsaday dhaawac muruqa ah.
Daafaca Danish-ka Erik Sviatchenko ayaa kusoo laabtay tababarka, laakiin waxa uu weli sugayaa inuu kusoo laabto taam ahaansho buuxa, taasoo la micno ah in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Nir Bitton uu mar kale ciyaari karo booska daafaca.
Leigh Griffiths ayaa taam ah ka dib markii uu kasoo laabtay dhibaato kasoo gaartay muruqa kulankii guuldarada kasoo gaartay kooxdiisa Dingwall, halka Moussa Dembele oo ku dhaliyay 12-daqiiqo seddexleey kulankii xulka France U21 todobaadkii hore uu diyaar u yahay kulanka caawa.
Kooxda PSG ma qabto wax dhaawax ah kulanka ay wajaheyso kooxda reer Scotland ee Celtic caawa, waxaana diyaar ah dhaman ciyaartooyda muhiimka ah ee kooxda.
PSG ayaa Celtic wajahday seddex jeer tartamada Yurub; mar walba waxaa badineysay kooxda France ka dhisan, Celtic ayaa kaliya hal dhibic ka heshay 13kii kulan ee ugu dambeyay Champions League.
PSG ayaa dhalisay goolal ka badan kuwa kooxaha kale xilli ciyaareedkan Champions League 17 ayaa loo diiwaan geliyay, waana kooxda keliya ee sidaas sameysay xili ciyaaareedkaan.
Tababare Rodgers ayaa badiyay kaliya labo ka mid ah 16kii kulan ee ugu dambeeyay oo uu ciyaaray isagoo tababare tartanka Champions League.
Dhinaca kale isla Group-kaan waxaa caawa kuwada ciyaari doona kooxaha Anderlecht iyo Bayern Munich, iyadoo kooxda Munich xaqiijisay marxalada wareega 16ka.